Ngebalcony kunye nechibi lembono yedama
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguBettina
Xa iyi-181 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Indawo entle entliziyweni eluhlaza yeGummersbach enendawo ngqo kumadama amabini. Indawo egqibeleleyo yokuphumla, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuqubha, i-kayaking & stand-up paddling.
Umbindi wesixeko onecinema entsha kunye neholo lomnyhadala, imayile yokuthenga, iibhari ezininzi kunye neendawo zokutyela zinokufikelelwa ngemoto okanye ngezithuthi zikawonke-wonke kwimizuzu embalwa.
Ngaba uza ngololiwe? Singakuvuyela ukukuthatha kwisikhululo saseGummersbach.
Ngaba ungaphezulu kwabantu ababini? Emva koko ungayibhukha
Amagumbi ethu anemigangatho emibini.
Kwinqanaba lokungena kukho igumbi lokuhlala elikhulu, ikhitshi, igumbi lokuhlambela (indlu yangasese, i-sink, ishawa) kunye ne-terrace enendawo yokuphumla kunye nombono we-Aggertalsperre. Ukusetyenziswa kwabelwana ngazo zonke iindwendwe kunye nathi.
Kumgangatho wokuqala kukho indawo entle yegumbi leendwendwe enegumbi lokulala (ibhedi ephindwe kabini 1.40 x 2.0 m) igumbi lokuhlala, elinesofa, iTV kunye nenkqubo yomculo, kunye netafile enezitulo ezi-4 kunye nebalcony enombono omkhulu. ichibi. Ukusetyenziswa kuphela kuwe.
Epasejini kukho igumbi lokuhlambela (yangasese, isitya sokuhlamba, ibhafu).
Ukusetyenziswa kwabelwana ngazo zonke iindwendwe.
Kukho nelinye igumbi le airbnb apha endlini.
I-wifi ekhawulezayo – i-181 Mbps
I-Aggertalsperre inokufikelelwa ngeenyawo kwimizuzu emi-2. Idama apho ukuqubha kunyanyezelwe. Ukuba uyafuna, unokuboleka isikhephe esinyovwayo. Kukwakho neendlela ezininzi zokukhwela intaba kunye neebhayisekile ecaleni kwamanzi.
I-Genkeltalsperre enemizila yayo emikhulu yokuhamba kuzo zonke iindawo nayo ikufuphi ngqo (imizuzu emi-2 ngeenyawo). Ukuqubha akuvumelekanga apha kwaye kuthuleke kakhulu kwaye kumnandi. Ukuhamba ngeenyawo okanye ukukhwela ibhayisekile kufanelekile.
Iziko laseGummersbach linokufikelelwa ngokukhawuleza ngemoto, ngebhasi okanye ngeteksi. (malunga ne-10 min / 7 km). Kukho iindawo zokutyela ezininzi, iibhari, iikhefi, indawo yokuthenga kunye nequla lokuqubha langaphakathi elinendawo yesauna, icinema enkulu entsha kunye neeholo zemisitho enenani elikhulu lemiboniso yenkqubo.
Für jeden Spaß bereit :-) Immer gut gelaunt und stets für alle Gäste da.
Sifumaneka kwiindwendwe zethu ubusuku nemini kwaye sihlala sineengcebiso ezilungileyo zemisitho kunye nohambo. Ukuba uyafuna, ungasijoyina kwaye ukonwabele nje urhatya kunye nathi, usapho kunye nabahlobo, okanye udibanise nathi xa siphuma siyokutya okanye siyokwenza imisebenzi.
Sifumaneka kwiindwendwe zethu ubusuku nemini kwaye sihlala sineengcebiso ezilungileyo zemisitho kunye nohambo. Ukuba uyafuna, ungasijoyina kwaye ukonwabele nje urhatya kunye nathi,…